GERMAN MAZWI AKAPINDA, GERMAN WEMAHARA
kamagra Iyo gel inokutendera iwe kuti uite kuita kwepamusoro kuita pabonde kuitira kuti utambe chinobatika chinoshanda mune ako zviitiko zvebonde.
kamagra gel Nezve izvi iwe unogona kugadzirisa yako erection dambudziko uye uwane mhinduro kumibvunzo yeiko chiri kamagra gel pane yedu saiti.
Manavgat Kuperekedza manavgat anoperekedza Bella Escort Manavgat Kuperekedza escort manavgat nyaya yebonde nyaya yebonde kuperekedza divi kuperekedza nyaya yebonde
KUPENYUWA KWEGERAN NAMES, KUPENYU NAMES EGERANI
Chikamu cheGerman chiuru, fomu rezhinji
Iyo fomu inoratidza imwe nhamba yemazita ndiyo yakasarudzika fomu yezita iro. Semuenzaniso, mazwi akadai secomputer, bhuku uye munhu mamwe emhando dzezita. Kuti uratidze mazita anodarika imwe chete, mazita ezhinji anoshandiswa. Semuenzaniso, mazwi akaita semakomputa, mabhuku, vanhu vari muzvizhinji.
MuTurkey, kushandura zita rimwechete rive rakawanda, izwi rakakodzera rinowedzerwa kumagumo ezita iri.
MuGerman, zvisinei, hapana mutemo wakatarwa unogona kupihwa kazhinji. Kunyange zita rimwe nerimwe richigona kuve mazwi akasununguka kubva kune mumwe neumwe muhumwe uye muzvizhinji, zvinogona zvakare kunge iwo mazwi mamwechetewo anoshandiswa kune mamwechete uye mazhinji. Dzimwe nguva huwandu hwezita hunogona kuwanikwa nekuwedzera zvimwe zvirevo kumagumo ezwi.
Sezvo mimwe mitemo isingakwanise kupihwa kuti iite mukuvakwa kwenzvimbo muchiGerman, mazwi anofanirwa kuverengerwa pamwe chete nechuru.
Mutemo wega wega unogona kupihwa mukuvakwa kwenzvimbo muchiGerman ndechekuti zvinyorwa zvemashoko ese mazhinji "kufa"Pasinei nekuti murume kana murume kana chinyorwa chezita rinowanikwa muchimiro, ruzhinji rwezita iri rinoshandiswa ne “die ik chinyorwa .. Izvi zvinoshanda mukushandiswa kwechinyorwa ichocho. Kunyangwe mamiriro ezvinhu akasiyana muzvinyorwa zvisina chokwadi, zviri nyore.
Ndizvozvo; zvinyorwa-zvinoyemurika (ein-eine) hazvishandiswe muzvizhinji.
Kune rimwe divi, zvinyorwa zvisina kunaka-zvinonamira (kein-keine) zvinoshandiswa chete sekuti “keine çoğ mune zvawanda.
Ngatitsigirei pamusoro apa nemuenzaniso;
der Vater (baba )---------------- kufa Väter (baba)
die Mutter (amai) ------------- kufa Mutter (amai)
das Mädchen (musikana musikana )------ kufa Mädchen (musikana musikana)
Sezvinogona kuvonekwa mumienzaniso iri pamusoro, mazwi ell der, das, die ik aishandiswa sekuti “die çoğ mune yesvomhu.
eini Bhazi (bhazi) ——————— Mabhasi (mabhazi)
ein Freund (shamwari) Fre- Freunde (shamwari)
ein Kellner (mumwe murindiri) ————- Kellner (vakamirira)
eine Lampe (mwenje) Mwenje- Lampen (mwenje)
eine Mutter (amai )---------- Mutter (vanaamai)
Sezvinogona kuvonekwa mumienzaniso iri pamusoro, ik ein ”uye“ eine ”zvinyorwa hazvishandiswe muzvizhinji.
Izwi rinoshandiswa riri roga.
kein Buch (kwete bhuku) e keine Bücher (kwete mabhuku)
kein Kellner (kwete wokumirira) ———- keine Kellner (kwete vanomirira)
keine Lampe (kwete mwenje) ———- keine Lampen (kwete mwenje)
keine Mutter (kwete amai) e keine Mutter (kwete vanamai)
Sezvinogona kuvonekwa mumienzaniso iri pamusoro, "kein" uye "keine kullanılır vanongoshandiswa se" keine da munezhinji.
Kunyangwe mimwe mitemo isingakwanise kupihwa kune yevazhinji, isu tichaongorora mitemo yehuwandu yezvimwe zvimiro zvezita kuitira kuti zvive nyore.
Nenzira iyi, iwe uchakwanisa kuwandisa mazita akawanda iwe pachako.
Takadzidza musiyano-weruzhinji musiyano wezita reGerman, uye nekudzidza kududzira mazwi echiGerman.
Tags: 10. kirasi yeGerman nzvimbo dzakawanda mazita, 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi yeGerman nzvimbo dzakawanda mazita, 9. kirasi german nyaya inotaura, ChiGermany muzvikamu zvizhinji, Zvizhinji, ChiGerman zvirevo zvizhinji, muchizhinji chinyorwa chechi German chinogadzira, plural fomu yemazita eGerman
Dhipatimendi reGerman Chikoro, Makamuri Echikoro
ChiGerman Kudzidza Bhuku
Coyright 2004-2020 Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. | ALMANCAX